Wafdi Jigjiga u aaday joojinta colaadda soohdinta Soomaaliya & Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wafdi Jigjiga u aaday joojinta colaadda soohdinta Soomaaliya & Itoobiya
A warsame 5 June 2015 5 June 2015
Mareeg.com: Wafdi uu hoggaaminayo wasiiru-dowlaha madaxtooyada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa maanta gaaray magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Wafdiga oo ka tagay magaalada Dhuusamarreeb waxaa qeyb ka ah guddoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye (Cirfo), siyaasiyiin iyo Odayaal dhaqameed.
Gudoomiyaha gobolka Galgaduud Xuseen Cali Wehliye (Cirfo) ayaa sheegay in ujeedka safarkooda uu yahay sidii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay uga wada hadli lahaayeen joojinta dagaallo ka dhacay xadka Itoobiya iyo Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca Galgaduud iyo Hiiraan.
Qaar ka tirsan odayaasha deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegay in dagaalka uu sababay dhimashada dad reer miyi ah oo deggen tuulooyin ka tirsan gobolka Galgaduud oo xuduud la leh Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa horey uga hadashay joojinta dagaalkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 ruux oo u badnaa xoola dhaqato.
Ciidammada Liyuu Boolis ee Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu eedeeyay inay ku lug leeyihiin dagaalka, walow aysan jirin caddeyn rasmi ah oo ku aaddan arrinkaas.
155 qof oo xalay lagu qabtay howlgal ka dhacay Ceelasha Biyaha
Kenya oo 5 ruux u maxkamadeyneysa weerarkii jaamacadda Gaarisa